Yini okufanele uyibuke ku-Hulu? Iqoqo Lokugcina lama-Movie nemibukiso ehamba phambili - Ezokuzijabulisa
IHulu ingelinye lamapulatifomu amahle kakhulu futhi athandwa kakhulu ukubuka uchungechunge oluphelele lwama-movie nezinhlelo ze-TV. Inazo zonke izinhlobo zezinhlobo kukhwalithi ephezulu ye-HD ongayibuka. Kepha ingqondo yakho ingahle ikucasule ngombuzo wokuthi ubukeleni kuHulu. Imvamisa uthola ukudideka phakathi kwenombolo ye- Imibukiso ye-TV nama-movie, kepha nakhu esikuphuma kuwe ngokukunikeza uhlu lwemibukiso nama-movie okufanele ubukwe kakhulu ku-Hulu.
Yini okufanele uyibuke ku-Hulu?
Mhlawumbe ukhathele ukubuka okuthile okuhle, kodwa bagcina ngokubuka iziqephu ezi-1 noma ezimbili zohlelo lwe-TV futhi namanje abakwazi ukuphatha ukungena kuzo. Mhlawumbe i-movie oyibukile izolo kusihlwa ibingafanele ukubukwa. Ngakho-ke, kungakuhle kakhulu uma ubunomuntu ongakutusa kuwe izinto ezinhle kakhulu ongazibuka kuHulu.
Siqoqe uhlu lwezinto ezinhle kakhulu ongazibuka kuHulu. Yibo imibukiso ekalwe kakhulu nama-movie , futhi konke kuzofanele ukubukwa. Ngakho-ke, ake sehle ohlwini ukuze sinqume ngezinhlelo zakho zangempelasonto.
Imibukiso Engcono Kakhulu ye-TV & Ama-Movie Ongawabuka ku-Hulu:
Okulandelayo uhlu lokubuka imibukiso ehamba phambili kuHulu:
Ngenye yezinhlelo eziphikisanayo ezitholakalayo. Uchungechunge lwayo oluphambili lwaseBrithani lunezinkathi eziyisikhombisa, eziqede yonke indaba. Ikhuluma cishe ngazo zonke izinhlobo zezinkinga zentsha. Ungabuka zonke izinkathi zonyaka ezitholakala kuHulu ukuze ujabulele izingqikithi zokugula ngengqondo, ukufa, ezocansi, ukuqinela, nokulwa.
Bhalisela i-Hulu Student Discount
Kuyathakazelisa kakhulu ukuyibuka. Imayelana nohambo lomuntu oyindodana yobushiqela enkabeni-mpumalanga. I-protagonist ishiya i-United States ibuyele ezweni layo empumalanga esempumalanga.
3. Imililo Emincane Yonke Indawo
Kususelwa encwadini ethi 'Imililo emincane yonke indawo.' UWitherspoon noKerry Washington basebenze kahle kakhulu ngamakhono abo. Umbukiso ukhuluma ngamatimu wengcebo, ilungelo, ukuzidela, nobunzima futhi ungathola izifundo eziningi ngenkathi wenza lo mbukiso.
Lokhu kumayelana nokucindezelwa kowesifazane ongenamandla futhi oyisigqila. Indaba ihamba ngokuzala, okuqubuka ngemuva kwenhlekelele e-United States. I-protagonist ngowesifazane oyisigqila ophoqeleka ukuba nengane yesikhulu esiphezulu kanye nonkosikazi wakhe ngaphandle kwamalungelo. Ngakho-ke, uyasokola futhi unethemba lokuthi uzokhululeka usuku ngalunye oluzayo.
Ukulingisa kulo mdlalo kuyamangaza, futhi umbukiso unomoya oyingqayizivele.
Umbukiso wamahlaya onendikimba ebalulekile. I-protagonist ibhekene nokuphikisana nokucwaswa kwabantu abamnyama okuzungezile, okuyinto engazange ibone ngaphambili. Njengomdwebi wamakhathuni omnyama, uzama ukukhanyisa ithalente lakhe ngokugqamisa izingqikithi zokungabi nabulungisa. Yize ingqikithi ibucayi kodwa ngokugqwayiza okuthile, umdlalo wenziwe waba mnandi kakhulu futhi wajabulisa.
Ihlale ibalwa phezulu phakathi kwabantu. Indaba iqala ngokusongela okujabulisayo. UCarrie ukholelwa ukuthi omunye wabadlali beqembu uthathekile yi-al-Qaeda, inhlangano yamaphekula. Manje lowo mlingani ubuyile ukuzosongela ngokusobala.
Indaba iqhubeka ngokusontelana okuningi, ikunikeze uhambo oluhlaba umxhwele nokugingqika ngenkathi uhamba ngeziqephu ezahlukahlukene.
7. Ukubamba okungu-22
Imayelana neWWII. Lo mdlalo ususelwe kwingqikimba yezimo ezesabekayo zempi. Indaba ihlanganiswe ngobuhlakani obukhulu, futhi uyayijabulela imicimbi kanye nemiqondo enengqondo ngenkathi udlula kuyo. Ungomunye wemisebenzi enekhono kakhulu yezincwadi. Kuyasiza futhi ababukeli ukuthi babone ngezindikimba zomzabalazo, ukuthatheka, nokuzwela.
Umbukiso we-TV othokozisayo futhi obukelwa kabanzi. Indaba ngeyendoda egama lingu-Hola, okhishwe ekolishi. Unenkinga yokondla ingane yakhe. Impilo iguquka kancane kuyena lapho ebona ukuthi omunye wabazala bakhe usephenduke umrepha. Uthola ithuba futhi abe ngumphathi wakhe.
Kuningi ongakufunda ngalo mbukiso.
9. Izinto Ezingcono
Umbukiso wethula umzabalazo wokuqhubekisela phambili umsebenzi ngomthwalo wokuba ngumzali. I-protagonist ngowesifazane ogama lakhe linguSam Fox, futhi unamadodakazi amathathu okufanele akhuliswe ngenkathi eqhubeka nomsebenzi wakhe ngasikhathi sinye. Umbukiso ufanele ukubukwa. Kukusiza ukuthi ufunde futhi uhlale unogqozi.
10. Umuntu Wokugcina Emhlabeni
Uma ukhathele ukubuka izindaba zothando nezenzo, futhi ufuna ukuzama into eyingqayizivele, khona-ke lo mbukiso yinto enhle kakhulu ongayibuka kuHulu. Umbukiso uzungeze owesilisa ozulazula edolobheni lapho impucuko icekele phansi ngokuphelele ngemuva kokuqubuka. Kepha kungekudala uthola naye.
11. Lihlala Libalele njalo ePhiladelphia
Umbukiso ujabulisa kakhulu ukuwubuka. Kuneqembu elihlala lizithola lisezimeni ezingabalulekile futhi ezingenangqondo. Ngakho-ke, uzokwehla ngokuhamba okumangazayo nokungaqondakali ngenkathi ubukele lo mbukiso.
Umbukiso unezesayensi eziningi ezingokwesiprofetho kuwo. Uma unesithakazelo ezimfihlakalweni, ikakhulukazi lezo ezihlobene nesikhala, lo mbukiso ungaba ukukhetha kwakho okuhle kakhulu. Imayelana nekusasa le-inter planet colonization kanye nomuntu wokuqala ukuthumela ku-Mars ukubona ukuthi impilo inokwenzeka yini kwi-Mars noma cha.
I-Youtube TV vs Hulu Live - Yikuphi okungcono kakhulu?
Uma ungumthandi wefilosofi futhi ugxila kumibono ehlukene yomphakathi, iParasite yi-movie engcono kakhulu ongayibuka. Igxila kakhulu kwingqikithi yokubandlululwa kwesigaba futhi inesakhiwo esihle.
14. Iziphethu Zesundu
Isimo se-movie siphumule kakhulu ngokukhanya okuningi. Indaba izungeze izivakashi ezimbili zomshado. Bathola ukuxhumana phakathi kwabo futhi bahlala ngosuku olufanayo kaninginingi.
Ingenye yama-movie wesenzo amangaza kakhulu. Imayelana neqembu lamaphekula asemkhankasweni wenuzi ukuze ukwazi ukujabulela ukuthokozisa okukhulu, idrama, kanye nesenzo ngokubuka le movie yesenzo ejabulisayo nedume kakhulu.
IHulu ingelinye lamapulatifomu athandwa kakhulu uku bukela ama-movie nemibukiso ye-TV. Kepha njengoba kunezinhlobo eziningi zemidlalo nezinhlelo, umuntu angadideka ekuthathweni kwesinqumo sokuthi uzobuka ini iHulu. I-athikili engenhla iqoqe ngemuva kokufunda ukubuyekezwa okuningiliziwe mayelana nayo yonke imibukiso ye-TV eshiwo ngenhla. Yonke imibukiso ye-TV ijabulisa kakhulu ukuyibuka. Zinezindaba ezihlaba umxhwele ezinezifundo eziningi zokuziphatha futhi, impela, kumnandi nokuzijabulisa okuningi.
Izibalo Zama-Instagram Namaqiniso (2020) - Konke Ofuna Ukuthi Ukwazi
Imidlalo Engcono Kakhulu Yesiphambano ngo-2020
I-PUBG Yehlulekile Ukuqalisa I-Steam - Umhlahlandlela Wokulungisa
Ungasula kanjani i-Cache ku-iPhone ne-iPad - iSafari, i-Apps
I-VPN ehamba phambili yeFireStick (2020) - Super Fast & Secured
guqula i-youtube ibe yifayela levidiyo
ukhansela kanjani i-disney plus
ungayithola kanjani i-netflix mahhala
indlela Hack akhawunti someones netflix